Tag: ahịa itinye n'ọnọdụ | Martech Zone
Tag: ahịa itinye n'ọnọdụ
Tọzdee, Disemba 15, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Kemgbe ihe karịrị afọ iri, anyị ahụla ọrụ ịre ahịa na-enyere aka nyochaa ma mepụta usoro azụmaahịa na ezigbo oge na nzukọ. Ọ bụ ezie na onye isi oche na-arụ ọrụ na atụmatụ na uto ogologo oge, arụmọrụ ahịa na-adịkwu nkọ ma na-enye nduzi na nkuzi kwa ụbọchị iji mee ka bọl ahụ na-aga. Ọ bụ ọdịiche dị n’etiti onye isi nchịkwa na onye nchịkwa iwe. Gịnị bụ Ọrụ Azụmaahịa? Site na ọbịbịa nke azụmaahịa azụmaahịa omnichannel na azụmaahịa azụmaahịa, anyị ahụla ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ ahụ
Okwu a na-arapara n'ahụ m n'izu gara aga: Ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ire ahịa n'ahịa. Ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ịmara ma ghọta onye ahịa nke ọma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ dabara ya ma ree onwe ya. Peter Drucker Site na ịda mba na ọrụ nke ọrụ na-abawanye maka onye na-ere ahịa, ọ na-esiri gị ike idebe ihe mgbaru ọsọ nke ahịa ahịa gị. Kwa ụbọchị anyị na-emeso